Haddii Geofumadas haysto akhristayaasha 100 - Geofumadas
Oktoobar, 2011 Internet iyo Blogs, egeomates My
Maqaalkani waxa uu ka tarjumayaa statistics laga bilaabo Janaayo ilaa October 2011 ka Google Analytics, oo fududeeyay in kiiska ahaayeen akhristayaasha kaliya 100 of this page. Waxaa cad ka tarjumayaa macnaha Hispanic, waxa uu noqon lahaa mid aad u kala duwan haddii page uu leeyahay mudnaan in luqad kale ama dadweynaha. Laakiin haddii xogta ay noqon kartaa mid waxtar leh ujeeddooyin marketing, halkan ay yihiin.
Waxaan sameeyay falanqeyn Magaalooyinka 100 ee wadamada 10, dhaqanka ugu xiisaha badan waa Mexico oo haatan ka sarreeya Spain, mowduuc in loo maleynayo, sida marka loo eego dadweynaha waxaa jira farqi la taaban karo, inkastoo aan ku xirneyn. Waxaa sidoo kale jira hoos u dhac lagu dareemi karo dadka ku hadla afka Ingiriiska, qayb ahaan sababtoo ah Si wanaagsan u hesho waxay kalifeysaa raadinta baaritaan dheeraad ah ee jawiga Anglo-Saxon oo matala Mareykanka, Ingiriiska, Australia iyo Hindiya.
Tani waxay noqonaysaa dhaqanka waddanka.
12 Waxay ka iman doonaan dalalka kale
Haddii cabbirku yahay magaalooyinka:
dhaqanka waa wax kala duwan, maxaa yeelay, inkastoo dalalka 8 yihiin waxa ka dhigi% 88 gaadiidka Hispanic ah, marka la eego magaalooyinka 10 magaalooyinka waaweyn oo kali ah ay gaaraan% 33 ah, oo ku talinaya in macnaha guud ee Hispanic jiro gaadiidka sare ee magaalooyinka ma ay joogaan caasimadaha. Waxa kale oo jira waa wasakh ay keentay in Tegucigalpa, taas oo aan ahayn mid weyn iyo mid ka badan oo ku xiran badan Guatemala laakiin isagoo ah goobta ku dhashay wadankan, wax badan oo ka mid ah gaadiidka keentaa Google.hn kala firdhiyey oo mowduucyadooda ay ka talo jacaylka in magaalada qaawan. Haddii aad soo wacdo dareenka Lima halkaas oo turjumaan ah eGeomate deggan yahay iyo waa in aan ka dhigi dhalanrog ee tirakoobka, balse ay jirto arrin rayn xiiso geospatial iyo sidoo kale sababtoo ah dalkaan waxa uu leeyahay dabeecad u ah socdaalka ka baadiyaha in magaalada wax yar ka yar musiibo.
7 wuxuu ka iman lahaa Lima
4 oo ka yimid Mexico City
4 ee Madrid
2 ee Barcelona
2 ee Tegucigalpa
2 ee Quito
2 ee Caracas
67 waxay ka iman doontaa magaalooyinka kale ee adduunka
Haddii ay ahaan lahayd browser:
40 ayaa isticmaali doona Internet Explorer wali
29 waxay ahaan laheyd kuwa jecel Firefox
27 waxay horay u baddali lahayd Chrome
2 ayaa isticmaali doonta Safari
1 Waxaan adeegsan lahaa Opera
1 waxay noqonaysaa dheellitiraadka isticmaala fursado yar oo ka duwan sida Mozilla wakiilka u leh moobaylka, browserka Android, Opera Mini, Internet Explorer oo leh qaabka Chrome iyo RockMelt.
Halkan waxaan ku aragnaa sida ay Chrome u sii wadi doonto martida, Taasi waa waxa aan ka hadlay dhowr maalmood ka hor Waxaan u maleynayaa in dhowr sano ay ka noqon doonto Firefox ma aha sababtoo ah waxay lumisay booqashooyinkii, sababtoo ah Internet Explorer waxay noqon doontaa mid si ka duwan 28%.
Marka laga hadlayo danaha ay isticmaalaan dadka isticmaala:
15 ayaa sidaas samayn doonta AutoCAD
6 mawduucyada isdhexgalka UTM
6 by ArcGIS ama ArcView
36 waxay ku sameyneysaa isku dhafan kala duwan, oo ay ka mid yihiin mawduucyadan waxaa lagu daray laakiin ma leh erayga tooska ah ee weedha raadinta. Laga soo bilaabo markaan waxaan marka hore ka dhigay qoraal aan la barbar dhigo qiimeeyaan in barnaamijku leeyahay ee waddada Geofumadas.
Haddii ay ahayd nidaamka hawlgalka
Halkan waxaan ku aragnaa in Mac weli wali yahay goob loogu tala galay beelaha laga tirada badan yahay, inkasta oo aanay jirin filim Hollywood ah oo aan la tusin manzanita. Waxa kale oo la arkaa in gaadiidka dadku uu yahay dad tiro yar.
95 ayaa isticmaali doona Windows
2 ayaa isticmaali doonta Macintosh
1 waxay isticmaali doontaa nidaamka hawlgalka mobile
Qaybinta 1 ayadoo adeegsanaysa moobiilka gacanta
Dhinacyadani ma ahan midda macaamiishu u leedahay suuqa moobiilka, haddii aan tixgelinno inay yihiin dadka 100, 72 waxay isticmaalaan aaladaha Apple haddii aan ku darno iPad, iPhone iyo iPod. Haddii isbeddelku uu yahay in macaamilku uu u socdo qalabka mobile, qalabyada waxaanuna ku xidhnaan doonnaa shabakadda, ka dibna shirkadda xigta waxay noqon doontaa Mac, waa arrin waqti iyo dhaxalnimo ah ee Steve Jobs.
45 ayaa ku samayn lahayd iPad
23 iyadoo loo marayo iPhone
18 adoo isticmaalaya Android
4 ayaa si la yaab leh u isticmaalaya iPod
4 adoo isticmaalaya SymbianOS
1 wali waxay isticmaashaa Nokia
Ku wareegitaanka xitaa ma gaarin 1 inta soo hartay waxaa loo qaybiyaa kuwa isticmaala Windows Mobile, Sony iyo Samsung.
Haddii aan naftayda cabbiro:
Waxaan ahay mid ka mid ah saddexda qof ee isku xira waddan ka muuqda liiska ugu horeeya.
Mid ka mid ah laba qof oo ka yimid magaalada oo ku yaal liiska labaad
Si ka duwan akhristayaasha, waxaan ahay qoraa waxaanan hadda isticmaalaa AutoCAD sida Microstation, gvSIG ka badan ArcGIS, Google Earth / Khariidadaha ... maalin kasta.
Mid ka mid ah 27 oo isticmaala Chrome sida browser
Mid ka mid ah 95 oo isticmaala Windows, inkasta oo aan wax badan ka xiran yahay mobile.
Mid ka mid ah 45 oo isticmaala iPad.
Maqaalka ayaa sidoo kale ina xusuusinayaa inaan nahay dad mudnaanta leh oo isku xiraya magaalooyinka ku xiran, hadaanu ku aragno liiska. Haddii nidaamkayaga hawlgalka, waddanka ama magaaladu aanay u muuqan halkaa, mudnaan badan oo dheeraad ah. Xaalado badan oo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee isticmaala software-ka iyo qalabka aqlabiyadda, tanu waa waxa igu dhacaya.
Post Previous«Previous Sida loo ogaado ereyga 'pdf file'
Post Next Kmzmaps, khariidado badan oo Google Earth ahNext »
3 Jawaab in "Haddii Geofumadas uu lahaa akhristayaasha 100"
IPad iyo Android?
Faderico isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay mid ka mid ah 8 Colombia
Mid ka mid ah 4 Bogotá
Mid ka mid ah 36 oo u yimid sababo kala duwan.
Mid ka mid ah 2 oo isticmaala Linux.
Iyo mid ka mid ah 18 ee isticmaala Android.
ALEXRONALD isagu wuxuu leeyahay: